Chii chinonzi PET: hunhu, mashandisiro uye marara | Green Renewables
Mukati menyika yepurasitiki pane mhando dzakasiyana dzezvinhu zvakagadzirwa. Imwe yacho ndiPET (Poly Ethylene Terephthalate). Icho chiri cheboka reboka repolyester uye imhando yepurasitiki mbishi zvinhu zvinotorwa kubva peturu. Vanhu vazhinji havazivi chii chinonzi PET. Yakawanikwa nevasayendisiti veBritish Whinfield naDickson, muna 1941, vakazvipa patent sepolymer yekugadzira tambo. Inobatsira kwazvo nhasi.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza kuti PET chii, ndeapi maitiro uye zvairi.
1 Chii chinonzi PET
2 Zvakaipira uye zvakanakira
3 Zvinhu zvipi zvinoshandisa PET
4 Yakachengetedzwa PET kurongedza
4.1 Kuderera kushandiswa kwesimba uye zviwanikwa zvekugadzirwa kwayo
4.2 Zviri nani kudzokorodza
Chinyorwa ichi chine hunhu hunotevera, hwakaita kuti chive chinhu chinoshanda uye chakanaka chekuvaka:
Inogadziriswa nekufema, jekiseni, extrusion. Inokodzera kuburitsa zvirongo, mabhodhoro, mafirimu, mafirita, mahwendefa uye zvikamu.
Kubuda pachena uye kubwinya nekukudza kushanda.
Yakanaka michina zvivakwa.
Sterilizable negamma uye ethylene oxide.
Mutengo / kuita.
Yakarongwa # 1 mukudzokororazve.
Chiedza chisina kuremerwa
Zvakaipira uye zvakanakira
Kufanana nezvinhu zvese, kune zvekare zvimwe zvakakanganisika pamusoro pePET. Kuomesa ndeimwe yekukanganisa kwayo kukuru. Yese polyester inofanira kuomeswa kuitira kudzivirira kurasikirwa kwezvinhu. Humidity yeiyo polymer kana uchipinda muitiro inofanirwa kuve inokwana 0.005%. Mutengo wemidziyo zvakare wakashata, sezvakaita tembiricha. Biologically yakatarisana jekiseni furidza Kuumbwa michina inomiririra yakanaka yekubhadhara kubva pahuwandu hwekugadzira. Mukuvhuvhuta kuumbwa uye extrusion, yakajairwa PVC michina inogona kushandiswa, iyo ine zvakawanda zvakasiyana-siyana kuburitsa akasiyana saizi uye maumbirwo.
Kana tembiricha ikapfuura 70 degrees, iyo polyester haigone kuchengetedza kuita kwakanaka. Kunatsiridzwa kwakaitwa nekugadzirisa michina kuti ibvumidze kupisa kuzadza. Crystalline (opaque) PET ine yakanaka tembiricha kuramba, inosvika 230 ° C. Hazvikurudzirwi kushandiswa kwekunze kwekunze.
Iye zvino tichaongorora kuti zvakanakirei ndeizvi: isu tine zvakasarudzika zvivakwa, kuwanikwa kwakanaka uye kudzokorodza kukuru. Pakati pezvinhu zvaro zvakanaka tine kujekesa, kubwinya, kujeka, chipingaidzo kune magasi kana hwema, simba rekukanganisa, thermoformability, nyore kudhinda neingi, ichibvumira microwave kubika.
Mutengo wePET wakachinja zvishoma pane mamwe ma polymers akaita sePV-PP-LDPE-GPPS mumakore mashanu apfuura. Nhasi, PET inogadzirwa kuNorth neSouth America, Europe, Asia, neSouth Africa. PET inogona kushandiswazve kugadzira chinhu chinonzi RPET. Nehurombo, nekuda kwetembiricha inobatanidzwa mukuita, RPET haigone kushandiswa kugadzira kurongedza muindasitiri yezvikafu.
Zvinhu zvipi zvinoshandisa PET
Kune zvinhu zvakasiyana zvakagadzirwa kubva ku polyethylene terephthalate kana PET. Izvi zvinotevera zvimwe zvinhu uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neiyi inogadziriswazve thermoplastic:
Midziyo yepurasitiki inogadziriswazve. Thermoplastics anoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemidziyo kana zvinwiwa, senge zvinwiwa uye mabhodhoro emvura. Nekuda kwekuomarara kwayo uye kuomarara, chave chinhu chekushandisa chezuva nezuva muindasitiri indasitiri. Kunyangwe ichikanganisawo chokwadi chekuti inogona kudzokororwazve, chokwadi chekuti zvinobatsira kugadzira mamwe mabhodhoro epurasitiki nemidziyo zvinoyerwa.
Mbatya dzakasiyana. PET Imhando yepurasitiki inoshandiswa muindasitiri yemachira kugadzira zvipfeko zvakasiyana. Muchokwadi, icho chinotsiva chakanakisa chemucheka kana kunyange donje.
Firimu kana firimu firimu. Iyi polymer yepurasitiki inoshandiswa zvakare kugadzira akasiyana mafoto mafirimu. Kunyangwe, iri zvakare kubatsira kwazvo kugadzira iro rekutanga X-ray yekudhinda bepa.
Muchina wakagadzirwa. Nhasi, polyethylene terephthalate inoshandiswa kugadzira akasiyana vending michina uye arcade michina.
Mheni dzekuvhenekesa. Iyo inoshandiswa kugadzira marambi emhando dzakasiyana. Muchokwadi, PET yakaratidza kuve chimwe chezvinhu zvinoyevedza mukugadzira dhizaini, ingave yekunze kana yemukati.
Zvimwe zvekushambadzira zvinhu. Semuenzaniso, mapepa kana zviratidzo zvekutaurirana kwekuona. Saizvozvowo, inowanzo shandiswa sechinhu chakanakira kugadzirwa kwezviratidziro muzvitoro uye akasiyana maratidziro ekutengesa kana zviitiko.
Dhizaini kujekesa uye kushanduka: Nekuda kweaya maviri maitiro, vatengi vanogona kuona mukati mezvavanotenga uye vagadziri vane akawanda maratidziro mikana.
Yakachengetedzwa PET kurongedza
Kune zvikonzero zvinoverengeka zvikonzero nei PET kurongedza kunoonekwa sekunyatso chengetedza nharaunda. Izvi ndizvo zvikonzero:
Kuderera kushandiswa kwesimba uye zviwanikwa zvekugadzirwa kwayo
Kwemakore, kuvandudzwa kwetekinoroji kwakadzora zviwanikwa zvinodiwa kugadzira PET kurongedza uye zvakare kushandiswa kwesimba mukugadzirwa kwaderedzwa. Uye zvakare, kutakurika kwayo kunoreva kuti mutengo uye zvinokanganisa nharaunda zvichadzikiswa panguva yekufambisa, nekuti pane zvishoma pamusoro.
Ongororo dzinoverengeka dzakaratidzawo kuti, zvichienzaniswa nezvimwe zvinhu, kurongedza kwePET kunodzora tsoka yekabhoni nekugadzira marara mashoma uye kushomeka kwesimba kwemidziyo yekugadzira.
Zviri nani kudzokorodza
Zvinowanzo davirwa kuti midziyo yePET inogona kungodzokororwa kashoma, chokwadi ndechekuti icho chinhu chinogona kudzokororwazve nekusingaperi kana nzira inoshanda yekudzokorora ikaitwa, zvinoenderana nechinangwa chinoshandiswa.
Panguva ino, PET ipurasitiki yakanyanya kudzokororwa pasi roseMuchokwadi, kuSpain, 44% yehomwe iri pamusika inoshandiswa yekushandisa kwechipiri. Chikamu chinofanirwa kuwedzerwa kusvika pa55% muna2025 kutevedzera nzira yakatenderedza hupfumi yakabvumiranwa neEuropean Commission.
Pamusoro pekushandiswazve sechinhu chekudya, yakadzoreredzwa PET inoshandiswa zvakare mumachira ekugadzira, emotokari uye emumba. Iyo zvakare ine chengetedzo yekushandisa yakadzokororwa midziyo yePET mune zvekudya nezvinwiwa. European Food Safety Agency yakaratidza kuti chinhu chakachengeteka, uye inoshandiswa pakutengesa nekushandisa zvinhu zvakagadzirwa zvichibva paPET yakadzokororwa yakawanikwa mumvura nezvinwiwa muSpain neRoyal Decree 517/2013 inobvumidza izvozvo mudziyo wekupedzisira unofanirwa kunge uine 50% mhandara PET.
Naizvozvo, tinogona kupedzisa kuti midziyo yePET yakachengeteka uye inochengetedza nharaunda, kwete nekuda kwekugona kwavo kukuru kwekudzokorora, asiwo nekuda kwesimba ravo mukugadzira. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve chii chinonzi PET uye hunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Chii chinonzi PET